I-Cascades Hotel - I-Sun City Onokuthi ukwenze
Izinto zokwenza e-Cascades Hotel,e- Sun City
Kukhona ilanga ne-adventure eyanele eSun City eNingizimu Afrika ngezinsuku zeholide eziyinkulungwane. I-Valley of the Waves izojabulisa wonke umndeni.
Qala usuku olwandle ogwini olumangalisayo lwe-Waves eSun City, uchitha ntambama eduze neMighty Big Five ye-Afrika bese uphela nge-sunset cruise echibini. Le Sun City Hotel inomkhumbi wokubhukuda obandayo nokubandayo nabalondolozi bokuhamba emini.
Nika izinkanyezi eziyisihlanu ukugudluza kwi-Spa ye-Gary Player Health Spa enempilo eminingi, isikhumba kanye nokunakekelwa kwama-spa okunethezeka kanye nemithi eminingi yokwelashwa okunethezeka.
Kungakhathaliseki ukuthi ungena kulo Mbuso Wenjabulo kusuka ebhalini lomoya oshisayo, itafula le-masseur noma imoto evulekile endle, imilingo yalendawo ekhethekile izohlala nawe kuze kube phakade.
I-course eseduze nayo iyinkambo enhle, ejabulisa ngokulinganayo ehaqwe imibono yeNdlovukazi emangalisayo.
Izinkantolo zeTennis, izinkantolo ze-squash kanye ne-studio evulekile eduze ne-Gary Player Country Club izogcina izivakashi zimelele eholidini labo lase-Sun City.
Njengoba kunezikhungo zomhlangano nezimo zokudiliva eziguquguqukayo, abasebenzi bekomhlangano abaqeqeshiwe kakhulu kanye nezinsiza ezibukwayo ezibukwayo, ukuqhuba ibhizinisi eSun City Hotels kuhlale kujabulisa. Ngakho ujabulele indawo futhi uphumelele enselele.
Indawo yokuhlala e-Sun City uma indawo ephelele yemikhosi ekhethekile ehlanganisa imishado, izinyanga zokuzalwa, izinsuku zokuzalwa kanye nokuzivikela okuthandana. Ukuze uthole umshado ongenakulibaleka we-Sun City, khetha phakathi kokwamukelwa okusondelene nabangani bakho nomndeni wakho noma ukhethe umcimbi wesigqila esimangalisayo somshado.